Shiinaha Ahama Steel welded Wire mesh -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Da Shang
Waxaan sidoo kale siinnaa shirkado xoojinaya badeecadaha iyo isku -darka duullimaadyada. Hadda waxaan leenahay xarunteena wax -soo -saarka iyo ganacsiga wax -soo -saarka. Waxaan ku soo bandhigi karnaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo badeecad ah oo laxiriirta xalkayaga jumlada Shiinaha Jumlada Shiinaha Stainless Steel Welded Wire Mesh BBQ Grill Grate, Waxaan soo dhaweynaynaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore ee dhammaan qaybaha nolosha si ay noola soo xiriiraan xiriirrada mustaqbalka !
Jumlada Shiinaha ee BBQ Grill Grate iyo BBQ Mesh qiimaha, Waxaan aaminsanahay tayada iyo qanacsanaanta macaamilka ee ay gaareen koox shaqsiyaad aad u go'an. Kooxda shirkadeena oo adeegsanaysa teknoolojiyadda ugu sarreysa ayaa soo saarta alaabo tayo leh oo aan fiicnayn si heer sare ah oo ay macaamiisheenna adduunku u jecel yihiin.
1/2 `` x1/2 ''
Hore: Mesh Wire silig
Xiga: Maro naxaas Wire mesh